Ukuzwa Okumnandi • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Hlikihla umzimba Izandla Ezine UNuru Slide I-Tantra Okwelapha
Imfudumalo yeNuru Gel
Sawubona, igama lami nginguBella. Ngivela e-United States, ikakhulukazi eCalifornia. Ngineminyaka engu-24 ubudala. Ngiyathanda ukuzijwayeza ukubhucungwa izinkanuko, nginokuthintana okunolwazi kakhulu. Ngimnandi futhi ngicwengiwe, ngiyakuthanda ukuxhumana namakhasimende ami. Ukubhucungwa kwami ​​kunesibindi futhi kuyaphumula, umkhathi uhlala uthukuthele kakhulu. Ngithanda ukudlala ngamafutha okubhucungwa kanye nezindlela ezahlukahlukene zokubhucungwa. Ngiyazithanda nezindawo ezithambile. Ukubhucungwa kwami ​​kungokwabesifazane futhi kuyinkanuko, amaklayenti ami ahlala ekhumbula ukubhucungwa kwami. Nginamajika wamaphupho. Umzimba wami muhle, ngingumasseuse okhangayo futhi ngiyathanda ukugqoka izingubo ezisemkhawulweni wokwenza inkanuko yobulili. Ngiyingcweti kwezokubhucungwa umzimba, ngicabanga ukuthi ngiyi-masseuse ekahle kuwe. Ngezinye izikhathi bangibiza ngobuhle baseMelika. Ulindeni?
Gxila enjabulweni nge-massage yethu yokugeza - ukuphumula kodwa ngesikhathi esifanayo nakho okuthakazelisayo. Le ndlela yokwelashwa iqala eshaweni, lapho ozochitha khona imizuzu eyi-10 ukufudumeza bese uxhuma amakhaza. Amanzi ezimpi azogeza ukukhathala kwansuku zonke futhi alungiselele umzimba wakho ukujabulela izinkanuko ezingenakulibaleka. I-adventure yakho izoqhubeka embhedeni ontofontofo lapho uzoba nemizuzu engama-60 yokuthanjiswa komzimba okuningana. Ama-masseuse azwelayo futhi anobuhlakani endlu yethu azosebenzisa yonke imikhuba yamasu we-tantric ayinkimbinkimbi nokuvusa inkanuko ukukwenza uzizwe ugcwele injabulo. Izandla ezixakekile nezintekenteke ze-masseuse zizokhulula yonke imisipha ekhathele yomzimba wakho futhi zikhulule amandla ezocansi aqoqwe emhlane ongezansi. Zonke izitho zomzimba wakho zizozizwa ziphumule ngokuphelele kanye nenjabulo enamandla.
Ngemuva kwehora eligcwele lokubhucungwa umzimba, uzobe usulungele ukumelana nohlelo, okuyimizuzu eyi-10 emangalisayo yokuthanjiswa komzimba nomzimba. Ukubhucungwa komzimba kuya emzimbeni kuyisimo esivusa inkanuko lapho unesikhuthazo somzimba ogcwele. Ngokungafani nezinye izinhlobo zokubhucungwa, zonke izingxenye zomzimba wakho kusuka phezulu kuye ozwaneni kufaka phakathi izingxenye zangasese zizogcotshwa ngumzimba obushelelezi futhi omuhle we-masseuse yezinkanuko futhi eshisayo yendawo yethu.
AMAFUTHA E-ARMATIC MASSAGE AZOKWENZA ISIKHUMBU SAKHO SIKHATHELE EKUTHINJISWENI KOMASSEUSE UKUZE UMZIMBA WAKHE UBHEKE KANYE EMZIMBENI WAKHO UKUNIKEZA UBUMNANDI BOKUGCINA.
Ngemuva kokufinyelela inani eliphakeme lentokozo ngesikhathi somzimba wokubhucungwa umzimba nomzimba le ndlela yokwelashwa izophela ekugezeni izinkanuko ezisheshayo nomelaphi wethu ukukhipha amafutha okubhucunga umzimba. I-Shower massage izokusiza ukuthi udedele ukucindezela kwempilo yakho yansuku zonke futhi uhambise ingqondo yakho emhlabeni wezinjabulo ezisezingeni eliphakeme. Ngaphandle kokuhlangenwe nakho okungokomfanekiso okungenakulibaleka, i-massage massage inezinzuzo zokwelapha ze-classical massage.
IMASSAGES E-EROTIC EPARIS
I-erotic massage salon isebenza 24/7. Lokhu kusho ukuthi ungazijabulisa nganoma yisiphi isikhathi. Vele uxhumane nathi ngocingo ukukwazisa mayelana nesikhathi sokuvakasha kanye nezifiso zakho. Kulesi sigaba, udinga ukukhetha uhlobo lobuningi bezocansi, unqume inani lamantombazane bese utshela ukuthi ngabe kudingeka izinsizakalo ezengeziwe yini - ukukhumula, amathuba okuthinta, ukuqabula noma ezinye izinketho. Engxenyeni ethi "Izengezo" ekhasini "Izinhlobo zesisindo nentengo."
Uma ungabaza futhi ungazi ukuthi yimuphi umxhumanisi okufanele akhethe, umxhumanisi wethu uzokujabulela ukukusiza uthathe isinqumo. Vele usitshele ngezifiso zakho - ukukhanya okulula, okunamandla, okwelapha, ukubhucungwa okuvamile noma okunye. Noma yimiphi imibuzo ethokozisayo ingabuzwa ngocingo. Ngemininingwane yokuxhumana, bheka isigaba "Oxhumana nabo".
Usuyovele ulindele intombazane. Sihlangana emnyango. Ukuhambisana nezidingo zenhlanzeko, simema iklayenti ukuthi ligeze. Uzothola indwangu yokuwasha elahlwayo, insipho, iziliphu ezilahlwayo. Ihlala kahle.
Ngaphezu kwalokho, umphathi wethu onobungane futhi ohloniphekile uzokwenza ukubonisana okufushane okuyisingeniso uma uvakashela i-salon mass okokuqala ngqa. Ngemuva kokuboniswa - ukuhlangana namantombazane. Izithombe zingabukwa kuqala ku-inthanethi kusayithi. Ngemuva kokukhetha, uya eshaweni bese uya egumbini elizimele ukuze uthathe umhlalaphansi bese uthola injabulo yenkanuko.
I-masseuse inikeza uhla olugcwele lwezinsizakalo ngokohlelo olukhethiwe - "Double Pleasure", "European", "For Women", Nuru massage, body massage noma okunye. Iseshini ngayinye iqala ngenqubo yokukhanya okulula. Lokhu kukuvumela ukuthi unciphise ukucindezeleka, ukhulule iklayenti futhi ulilungiselele ukuthokozela okuqhubekayo. Amafutha aseMpumalanga akhethwe kahle, anomsindo athuthukisa imizwa ethintekayo. Ukuthinta kwe-masseuse kunika injabulo enkulu nakakhulu. Ngemuva kwalokho konke kwenzeka njengoba kunikezwe uhlelo olukhethiwe. Lokhu kungaba umdanso wangasese, ishawa ngokuhlanganyela, ukuqabulana, ukubhucungwa kwezocansi noma ezinye izinsizakalo ezingabandakanyi ucansi oluqondile. I-massage esebenzayo iqeda ukukhathala. Umphumela wanoma yikuphi ukukhetha kwezinhlelo uhlala ufana.
KUNGANI KUFANELE UYALE I-EROTIC MASSAGE IZENZO:
Lokhu ukuvuka kwenkanuko;
Ukuqinisa amasosha omzimba;
Ukwenza ngcono amandla emadodeni;
Kufinyelela iphuzu lokuzijabulisa eliphakeme kakhulu.
I-75013 Paris, eFrance
Monday: 10: 00 AM - 11: 00 PM
NgoLwesibili: 10: 00 AM - 11: 00 PM
ngoLwesithathu: 10: 00 AM - 11: 00 PM
ULwesine: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Friday: 10: 00 AM - 11: 00 PM
NgoMgqibelo: 10: 00 AM - 11: 00 PM
NgeSonto: 10: 00 AM - 11: 00 PM